Izityalo ze-aquarium | Ngeentlanzi
Las Izityalo ze-aquarium Inye into yokuhombisa ekufuneka siyithathele ingqalelo. Ngokukodwa ukuba sifuna ukubabeka kwi-aquarium yethu, kuba kufuneka sazi iinkcukacha ngamanye amaxesha ezingabonwa kwaye ezinokubangela uzinzo lwe-aquarium yethu kakhulu.
Kwaye oko Izityalo ze-aquarium zinokuba ngumlingani okanye utshabaNgamanye amaxesha, kufuneka silandele inkqubo yokuziqhelanisa ne-aquarium yethu, ukuze singangcolisi amanzi kwaye sisinike iingxaki.
Kwesi sithuba uya kufumana, Iindidi zezityalo, iingcebiso ngokwaziswa kwazo kwi-aquarium yethu kunye neenkcukacha ezingapheliyo zokuzonwabela ngokupheleleyo ekhayeni lethu nokuba iintlanzi zethu ziziva zikhululekile kwi-aquarium yazo. Kubalulekile ukuthathela ingqalelo zonke iinkcukacha zokukhathalela izilwanyana zethu.
Kumanqaku angaphambili sijonge i-algae ebomvu kubunzulu. Namhlanje sikuzisa elinye inqaku elihambelana nalo. Kule meko…
Namhlanje siza kuthetha ngesityalo esisetyenziswa ngokubanzi kwii-aquariums. Ngu Java moss. Ingama lakho…
Ukuhombisa kunye nokwenza indalo yeentlanzi zethu singazisebenzisa zombini izityalo ezingezizo ezendalo. Nge…
Izityalo zasemanzini zingaphezulu kwento nje yokuhombisa. Zizinto eziphilayo kwaye ngenxa yoko zifuna ezinye ...
Izityalo ezidadayo, ngaphandle kokuhombisa ngaphakathi emanzini, zinokubonelela ngokutya kwezinye iintlobo zentlanzi ...
Kwiindawo ezininzi zamanzi endizibonileyo ebomini bam, izityalo zasemanzini ezihlala ngaphakathi, ...